Uzama iindlela zokukhulisa iimpiko zakhe umzobi okhasayo | News24
Uzama iindlela zokukhulisa iimpiko zakhe umzobi okhasayo
Omnye wabantu abamnyama owabulawa ngamapolisa eMelika uGeorge Floyd
Umzobi okhasayo wase Site C ubongoza uluntu ukuba lumncede lumdibanise nabantu okanye izikolo ezizobayo ekuhlaleni ukuze akwazi ukuphuhlisa isakhono sakhe sokuzoba.
U-Kwanele Bacele (onama 34), nongumzobi owaziwayo engingqini yakhe nakumakhasi ezonxibelelwano, uchaze ukuzoba nanje ngento esegazini kuye.
“Ukuzoba yinto endikhule nayo ndisemncinci. Bendisithi ukuba ndihleli nje akukhonto ndiyenzayo ndithathe incwadi ndizobe. Bendizoba nantoni na endiyibonayo ephambi kwam,” utshilo uBacela.
Uthe uqale ukusithathela ingqalelo esisakhono ngomnyaka ka 2013, nalapho aye waqala ukuhlawulisa abantu xa ebazobele. “Kuqala ndandizoba njeee, kodwa ndithe ndakubona ukuba nyani ndiyazoba kwaye nabantu bayandikhuthaza ndaqonda ukuba mandihlawulise. Umntu uza nje nomfanekiso walonto afuna ndimzobele yona ndiwukhuphele. Mna andizobi ndiyakhuphela,” utshilo Bacela ehleka. Waleke ngelithi imizobo yakhe iqala ku R50 ukuya phezulu ngoba ixabiso lixhomekeka kulonto umntu afuna ukuzotyelwa.
“Uzokuba nje umzimba ongentla womntu ndiye ndibize R50. Xa ngaba bebathathu emfanekisweni ndiye ndibize R150 ndibhatalisa ngokwentloko zabantu ezikumfanekiso lowo ndiwenzayo,” ucacise watsho.
U-Bacela nosebenza njengonogada uthe akakwazi ukuxhomekeka ekuzobeni kuphela ngoba imali yawo iza kade, kwaye kufuneka exhase nosapho lwakhe.
“Ndiyanqwenela ukuya esikolweni sokuzoba ndiyofunda ukuze nam ndibe nesatifiketi ukuze abantu bazokundithemba. Ingxaki abantu abaninzi abakuthembi, kwaye abakuniki ngqalelo xa ngaba into oyenzayo ungayifundelanga ngoba bafuna ukubona iphepha (isatifiketi). Kwaye naxa ubaxelela ixabiso basoloko bekhalaza oko nam ndide ndincame ndihle,” ucacise ngelitshoyo. Uthe oko waqala ukuzoba ngokuzimisela azange wangenela nalunye ukhuphiswano lwabazobi.
“Andinalwazi lokuba ndingenza njani na ukuze nam ndikwazi ukungenela ukhuphiswano xa lukhona. Andinalwazi lwezinto ezininzi, kodwa ukuzoba kona ndiqinisekile ngako,” ucacise ngelitshoyo.
Uhambise wathi ukuzoba umntu uchitha nje iiyure ezimbini. “Amaxesha amaninzi xa ndizoba ndisebenzisa ipensile kunye nepeni, kodwa ndiyakwazi nokuzoba ngepeyinti. Umzekelo, ngamanye amaxesha ndiye ndicelwe ngabantu bendawo ezithengisa utywala, iivenkile okanye indawo ezigcina abantwana ukuba ndibazobele kwindawo abasebenzela kuzo,” uthethe watsho.
Uthe abanye babantu abaziwayo esele ekhe wabazoba ngowayesakuba ngomongameli waseMzantsi Afrika uNelson Mandela, nowayesakuba ngumlinganiswa kumabonakude nowayengumama kasaziwayo uSomizi Mhlongo uMary Twala, kunye nomnye umdaka waseAmelika owabulawa ngamapolisa uGeorge Floyd.